Lahatsoratra nosoratan'i Dan Pantelo
Dan dia mpanatanteraka ara-teknolojia marketing ary mpanorina/CEO an'ny Marpipe. Talohan'ny nananganana an'i Marpipe dia nanangana consultant ara-barotra tao amin'ny efitrano fatoriana tao amin'ny oniversite i Dan, izay nivadika ho masoivoho mitombo haingana any Soho, Manhattan izay manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana famoronana sy famokarana fitakiana ho an'ny orinasa DTC. Ny Marpipe dia novolavolaina tamin'ny voalohany rehefa nisedra olana tamin'ny fitsapana famoronana ny masoivoho, ary androany, Marpipe dia nanangona mihoatra ny $10m avy amin'ireo tia an'i Adobe, Samsung, ary mpanatanteraka ao amin'ny Buzzfeed, Hubspot, MediaMath, ary Criteo.
Alarobia, Desambra 22, 2021 Alarobia, Desambra 22, 2021 Dan Pantelo
Nandritra ny taona maro, niankina tamin'ny angon-drakitra mikendry ny mpihaino ny mpivarotra sy ny mpanao dokam-barotra mba hahafantarana hoe aiza sy eo anoloan'izay handefasana ny famoronana doka. Saingy ny fiovan'ny fomba fitrandrahana angon-drakitra vao haingana - vokatry ny fitsipika vaovao momba ny fiainana manokana napetraky ny GDPR, CCPA, ary ny iOS14 an'ny Apple - dia nahatonga ny ekipan'ny varotra hikorontana. Satria mihamaro ny mpampiasa miala amin'ny fanaraha-maso, ny angon-drakitra mikendry ny mpihaino dia lasa tsy azo antoka. Marika mitarika tsena